Meizu 15 waxaa la soo bandhigi doonaa Abriil 22 si rasmi ah | Androidsis
Muddo bilo ah, daadinta ku jirta Meizu 15 ma joojiso inay dhacdo. Xog kasta oo badanaaba waxay soo baxdaa aaladda cusub ee sumadda Shiinaha. In kasta oo illaa iyo hadda shirkaddu aysan sheegin wax soo bandhigid ah iyo taariikh la bilaabayo. Waxyaabaha abuuray jahwareer badan suuqa. Ugu dambeyntiina, waxaan horeyba u haysannay taariikhda gudbintaada.
Sababtoo ah shirkadda lafteeda ayaa horeyba u xaqiijisay goorta ay soo bandhigi doonaan Meizu 15. Bilo kadib markii uu dillaacay, taleefanka ayaa ka dhow sidii hore. Aad ayaan ugu dhawahay runtii, maxaa yeelay waxaa la sii deyn doonaa dhowr toddobaad. Taariikhda ay dooratay shirkaddu waa Abril 22.
Markaa waa wax ka yar laba toddobaad in aan ugu dambayntii ogaan karno wax walba oo ku saabsan aaladda cusub ee shirkadda. Wax walba waxay muujinayaan in Meizu 15 this uu ballan qaadayo inuu noqon doono calankeeda cusub. Marka filashada hareeraha taleefanka waa ugu badnaan. Gaar ahaan daadad badan kadib bilihii lasoo dhaafay.
Intaas waxaa sii dheer, taleefanku ma noqon doono kan kaliya ee shirkaddu goob joog ka ahaan doonto munaasabadda. Sababtoo ah Meizu 15 Lite iyo Meizu 15 Plus ayaa iyaguna imaan doona. Marka waxay raacayaan noocyo sida Huawei waxayna soo bandhigayaan wadar ahaan seddex moodal oo ay ku cusbooneysiinayaan heerkooda sare. Sharad xiiso leh.
Qeexitaannada saddexda nooc ayaa illaa hadda daadanayay. Marka waxaan ka heli karnaa fikrad dhammaystiran ama ka yar dhammaystiran mid walba oo iyaga ka mid ah. In kasta oo aynaan weli haysan qeexitaannada buuxa ee nooc kasta oo moodellada ah. Waa inaan sugnaa laba toddobaad.
Waxay umuuqataa in bilooyin badan oo xanta ah iyo daadinta kadib, Meizu uu durbaba diyaar u yahay wax walba. 22-ka Abriil markay tahay 19:30 pm (waqtiga maxalliga ah) waxaan awoodi doonnaa inaan ogaanno noocyada cusub ee taleefannada ee nooca Shiinaha. Meizu 15 ayaa hada sugaya. Marka waxaan dheg u noqon doonnaa wixii war ah ee arrintan la xiriira. Waxay noqon karaan telefoonada caawiya astaanta samaynta boodada caalamiga ah ee ay rabaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Meizu 15 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa Abriil 22